छोराछोरीको डेब्युमा शिव श्रेष्ठ र करिश्मा मानन्धरबीच झगडा - Sankalpa Khabar
1. देव गुरुङलाई हटाए विशाल भट्टराई प्रमुख सचेतक बनाइयो
2. चैनपुरमा पत्रकारिता तालिम
3. ५२ सिडिओको सरुवा, को कहाँ ? (नामावलीसहित)
4. बलात्कारीलाई १८ वर्ष कैद
5. रजनीतिको केन्द्रविन्दुमा देउवा : भारतीय र चिनियाँ राजदूत बुढानिलकण्ठमा
6. व्यास गुफा र तनहुँसुरलाई जोड्न हाफ म्याराथन
छोराछोरीको डेब्युमा शिव श्रेष्ठ र करिश्मा मानन्धरबीच झगडा
१ माघ ०९:३२
काठमाडौं । दस महिनापछि आज (माघ १ गते) देखि नेपाली सिनेमा हल खुला भएका छन् । आजदेखि दर्शकले नयाँ नयाँ सिनेमा हलमा गएर हेर्न पाउने भएका छन् ।
बन्द सिनेमा हल खुलाउन अभिनेता शिव श्रेष्ठ निकै कुदाकुद गरे । कारण थियो उनका छोराको डेब्यु । यससँगै अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरकी छोरीले पनि ठूलो पर्दामा डेब्यु गर्दैछिन् । ‘एउटा यस्तो प्रेमकहानी’ चलचित्रमार्फत शक्ति श्रेष्ठ र कविता मानन्धर डेब्यु गर्न लागेका हुन् ।
तर, आफ्ना छोराछोरीको डेब्युमा खुसी हुनुपर्ने बेला अभिनेता शिव श्रेष्ठ र अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरबीच लफडा भएको छ । यही लफडाका कारण आफूले खेलेको चलचित्र रिलिज नहुँदै करिश्माकी छोरी कविता अमेरिका पुगेकी थिइन् । र, डेढ वर्षपछि फर्केकी छन् ।
कविताका बाबु विनोद मानन्धरका अनुसार चलचित्रको पूरा सुटिङ भएको थिएन । डबिङ पनि गरेको छैन । टुक्राटुक्रामा सुटिङ गरिएको थियो । उनी भन्छन्, ‘डबिङ कसलाई गराएको हो थाहा छैन । मेरी छोरीलाई आफैँ डेब्यु गराउने सुरमा थिएँ । अहिले त चलचित्र नै नगर्ने भन्छिन् ।’ आधा सुटिङ गरेर अमेरिका फिरेकी कविता सुटिङका लागि नेपालमा आएको र यसबीचमा डेढ वर्ष पनि बितिसकेको विनोदको भनाइ छ ।
चलचित्रमा कविता र शक्तिको अलवा शिव श्रेष्ठ, प्र्रियंका कार्की, वर्षा राउत, संजोग कोइराला, आयुष्मान देशराज जोशी, निरन खड्कालगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
करिश्माले यस्तो कोरोना महामारीका बेला चलचित्र रिलिज नगर्न आग्रह गर्दा अभिनेता शिव श्रेष्ठले ‘तिम्री छोरी यस्ती मोटी छ, कसले डेब्यु गराउँथ्यो होला’ भनेपछि मनमुटाव सुरु भएको सिने क्षेत्रमा चर्चा छ । बुझिएअनुसार ‘एउटा यस्तो प्रेमकहानी’ दुई भागमा निर्माण भइरहेको छ । चलचित्रको निर्देशन दिपेश सापकोटाले गरेका छन् ।
कांग्रेसलाई ओली समूहले प्रधानमन्त्री नदिने, प्रचण्ड–माधव समूह दिन तयार
१३ फाल्गुन ०९:१४
गीतकार उप्रेतीको ‘नजरको गुलेली’ सार्वजनिक
१३ फाल्गुन १७:४२
संसद् पुनःस्थापनापछि निर्वाचन आयोगलाई हाइसन्चो
१३ फाल्गुन ०९:४८
पश्चिमी वायूको आंशिक प्रभाव, केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने
११ फाल्गुन ०७:४०
अलमलमा सभापति देउवाः कोसँग सत्ता साझेदारी गर्ने ?
१२ फाल्गुन १९:०१
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्धामा आज पेशी, कहिले आउँला फैसला…
११ फाल्गुन ०८:२१
दाहाल–नेपाल नेकपा संसदीय दलको बैठक अनौपचारिक
१२ फाल्गुन १७:२४
नेकपा ऋषि कट्टेलले लगे ओली र प्रचण्डलाई झन् संकट
१४ फाल्गुन ०९:२३
यस वर्षको ‘शमी साहित्य साधना सम्मान’ मोहन वैद्य ‘किरण’लाई
१३ फाल्गुन १८:१२
जनताको अहितमा कसैसँग सम्झौता गर्दिन्
१४ फाल्गुन १८:१२
१५ फाल्गुन ०६:५२
१४ फाल्गुन २३:०७
शनिबारदेखि सुरु हुँदै नेपाल–बङ्गलादेश युवा सम्मेलन
१४ फाल्गुन १७:५२
माछापुच्छे बैंकले बनायो पोखरालाई क्युआर मय
१४ फाल्गुन १७:४०
जी २० का अर्थमन्त्रीहरु बीच कमजोर मुलुकहरुलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा…
१४ फाल्गुन १७:३५
परीक्षा उत्तीर्ण भएको महिना दिनमै चालक अनुमतिपत्र
१४ फाल्गुन १७:३३
१४ फाल्गुन १७:२३